साइबर ब्यूरोको नक्कली फेसबुक पेज बनाउने पक्राउ ! « MNTVONLINE.COM
काठमाडौँ । प्रहरीले साइबर ब्यूरोको नक्कली फेसबुक पेज बनाउने एकलाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीको साइबर ब्यूरोको टोलीले आफ्नो संस्थाको नाममा फेसबुक पेज बनाएर विभिन्न व्यक्तिसँग कुराकानी गरेको आरोपमा कपिलवस्तुका १८ वर्षीय प्रज्वल पोखरेललाई पक्राउ गरेको हो ।
काठमाडौँ । कोरोना सङ्क्रमण बढेसँगै सरकारले जोखिम न्यूनीकरणका लागि विभिन्न आदेश जारी गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संक्रमण रोग ऐन, २०२० को दफा
अब विदेशबाट आउनेले १० दिन अनिवार्य होम क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने !
मानव बेचबिखन आरोपमा एक जना पक्राउ
काठमाडौंमा रडले हिर्काएर भाउजूको हत्या, आफैं गए प्रहरी कार्यालय !
बैतडीमा घनले हानेर आफ्नै भान्जाको हत्या !
ग्राहकसँग जबरजस्ती यौनसम्बन्ध राख्न लगाउने श्रेष्ठ पक्राउ !
श्रीमतीको हत्यापछि कारागारभित्रै आत्महत्या !